Sidee baan u wanaajin karaa SEO-ga aniga oo hagaajinaya dhabarka dib-u-hagaajinta?
Haa, waxaa suurtagal ah in aad si fiican u kiciso dadaalkaaga guud ee SEO - kaliya adoo hagaajinaya xiriiriyadii hore ee hadda jira iyo codsiga dib u jeedin dib u jeedin. Sidee? Waa hagaag, aynu aragno.
Sadex Sababood oo ugu muhiimsan ee lagu soo celinayo xiriirrada khatarta ah:
1. Waxaad si buuxda u xakamayn kartaa nidaamka fulintiisa (si ka duwan sida qaybta libaax ee shaqada kale, tusaale ahaan sida dhiirrigelinta content);
2. Rakibidda xiriirrada jajaban, ma keli kari kari kartid kaliya qiimeyntaada raadinta laakiin waxay helayaan faa'iidooyin badan oo qarsoon (e. g. , waayo-aragnimo userka fiican);
3. Waxaad samayn doontaa inta ugu badan ee dadaalka aad horey u qabatay.
Iyadoo la tixgelinayo in geeddi-socodka oo dhan lagu qaado miisaanku inuu cadeeyo inuu yahay mid miisaaman oo maareyn ah oo suuragal ah inuu si habboon u maareyn karo, halkan waa tallaabooyin kooban oo lagu fulinayo hab sax ah:
Aqoonsiga dhammaan isku-xireyaasha jaban ee aad ka heshay boggaaga ama bloggaaga.
Isku-xayiraan nidaamyada waaweyn ee dib u habaynta.
Isticmaal dhismaha shabakadda internetka iyo qalab caawiye si aad ugu qorto dib udajinta.
Dhameystir hawlahaaga dib u noqoshada dib u habeyn iyo baaritaan guud.
Aqoonsiga Xiriirka Bulshada
Aynu mar kale sheegno - waxaanu raadineynaa dib u jeedin dib u jeedin ah oo horseedi doona jadwalka boggaaga boggaaga ama blog. Habkaas, waxaad u baahan doontaa inaad heshid warbixin kooban oo khaas ah - iyaga oo isticmaalaya labada Raadin ee Google, ama qalab kasta oo caawiya khadka caawinta oo khaas ah oo loogu talagalay macluumaad badan oo ka sii wanaagsan, sida Open Site Explorer (Moz), Falanqeeye Heer Xeelan (Semalt), ama Qaylo-dhaanta Qashinka "SEO". Ka dib, waxa kaliya ee adiga kugu habboon inaad go'aan ka gaarto qaab-dhismeedka aad ku qaadato hawshaas.
Sidaa darteed, xasuuso - waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad hagaajiso dhammaan isku-xireyaasha gudaha ee aad ku leedahay boggaaga ama blog-ka, maadaama ay dhici karto in badan oo URL ah oo soo haajiray sanadihii ugu dambeeyay. Sidaa darteed, dhammaan waxaad u baahan tahay waxay isku diyaarineysaa in badan oo ah buug gacmeed iyo muuqaal ahaanba shaqeynaya waqti - adoo isticmaalaya "Search Console" si aad gacanta ugu soo celiso dhabarka gacanta. htaccess ama plugin gaar ah haddii aad isticmaalayso WordPress. Ama waxaa laga yaabaa inaad si dhakhso ah u xakamayso xiriiro badan oo u baahan hagaajin - si fudud adoo isticmaalaya mid ka mid ah caawiyeyaasha horay loo soo sheegey.
Xayeysiinta URLs By Redirect Patterns
Sida user ah ee WordPress, waxaa la filayay in aan aqoonsado qaababka URL hore (tusaale ahaan, soo socda sida domain + sanad + bish + boostada. html), iyo qaababka cusub ee URL (e. g. , domain + magaca boostada). Ku dhajinta Ingiriisi cad, waxaad u baahan doontaa inaad qorto waxbarid khaas ah Google ee rooga boodboodaya iyaga oo u sheegaya iyaga ama tan isbeddelada joogtada ah ee joogtada ah - labadaba URL, iyo bogga HTML-ka (haddii kale, shaqada 301 dib u noqosho). Qoraalka Gaaban
Aniga ahaan, waxaan isticmaalay qalab caawiya Permalink Helper si ay ula shaqeeyaan URL nambarada. Wax kasta waa inay ahaataa is-sharaxaad, laakiin xusuuso in ay leeyihiin qaabka URL ee muuqaalka ah sida URL-yada laga bilaabo domain-kaaga, raacay tirooyin iyo isku-dhafan, si loo dhammeeyo da'da isbeddelka ee WordPress, iyo xusuusnow HTML in baxsado muddada. Xasuuso in doorsoomaha waa in had iyo jeer la bilaabo oo la dhameeyaa.
Dhameystirka Dib-u-Celinta ee Dib-u-Soo-celinta (Backlinks Backfile) oo Jeegaree
Si aad u dhamaystirto nidaamka,. faylka htaccess ee code iyada oo loo marayo xiriirka FTP ee adeegahaaga. Digniinta - hubso in wax walba ay ku jiraan. Waxaan loola jeedaa in xukunka la galo website-ka ama blog-ka. Htaccess, haddii wax khalad ah ay dhacdo waxaad u maleyn kartaa waxkasta oo dhan - xitaa iyada oo leh xeer yar oo qaldan. Habkaa, waxa aad u baahan tahay waa inaad kala qaybisid jihadaada Meelaha iyo Targetka, waxaad ku dhex socotaa nidaam baaritaan oo leh qalab taran - oo aad samaysay!
Tilmaam: nidaam isku mid ah ayaa loo isticmaali karaa in la jebiyo xidhiidhada gudaha ee sidoo kale. Dabcan, waxaa haboon in aysan u gudbin wax marin ah, laakiin nasiib daro, mar walba ma ahan mid suurtogal ah. Xasuuso - in aad dib udhigasho aad uga fiican tahay 404 Source .